အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိပြီးအဆိုပါယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK) အများအား "ဗြိတိန်နိုင်ငံ" အဖြစ်လူသိများမြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နှင့်အတူဂရိတ်ဗြိတိန် (အင်္ဂလန်, အိုင်ယာလန်, စကော့တလန်နှင့်ဝေလနယ်) ၏ပါဝင်ပါသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၌တည်ရှိ၏။ ဗြိတိန်ရဲ့စုစုပေါင်းမြေဧရိယာခန့်မှန်းခြေ 93,600 သန်းမြို့သားတို့နှင့်အတူ, 242,500 စတုရန်းမိုင် (65 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တွင်စတုတ္ထအများဆုံးလူဦးရေထူနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အဖြစ်, ဗြိတိန်အစိုးရ၏ပါလီမန်စနစ်ကရှိပါတယ်။ အဆိုပါဧကရာဇ် since1952 လှည့ ်. ခဲ့သူဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကဥရောပတိုက်တွင်စတုတ္ထအကြီးဆုံးမြို့တော်အောင် 10.2 လူဦးရေသန်းနှင့်အတူယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ပါလီမန်အဆောက်အဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် corporate ဥပဒေပြဌာန်း 2006 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤသည်အက်ဥပဒေဗြိတိန်အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာဆိုထားသည်။ ဒါ့အပြင်ယူကေမှာကော်ပိုရိတ်လုပ်ရပ်များထိန်းညှိသောအခြားအမှုအဗြိတိန်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု Code ကို, အကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောအက်ဥပဒေ 1986, ဥရောပယူနီယံညွှန်ကြားချက်များနှင့်တရားစီရင်ရေးတို့ပါဝင်သည် အမှုပေါင်း.
• ကော်ပိုရိတ်အခွန်အဘယ်သူမျှမ: နေသမျှကာလပတ်လုံးဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းဗြိတိန်နယ်နိမိတ်အတွင်းမရှိ, လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကျင်းပအဖြစ်မရှိ, ကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ဗြိတိန်၌ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• အဆင်ပြေထဲဆွဲသွင်းပါဝင်: UK မှာကော်ပိုရိတ်များ၏အမည်များများ၏မှတ်ပုံတင်ကြေး mail ဖြင့်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်စေတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
• အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်ရှိပါသည်။
• ဗြိတိန်တွင်အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများ: နှစ်ပတ်လည်ကော်ပိုရေးရှင်းအစည်းအဝေးများဗြိတိန်အတွက်လိုအပ်သည်ပေမယ့်ဒီအစည်းအဝေးတွေဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့်ရန်နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကော်ပိုရိတ်နာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တင်သွင်းနေကြသည်။ UK ရှိကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုဖြစ်စေအွန်လိုင်း reserved နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစကားများကော်ပိုရေးရှင်းကသရဖူ, အင်ပါယာ, Imperial တော်ဝင်, ဝင်ဆာ, ဘဏ်, အာမခံချက်, အဆောက်အအုံ Society ကဗြိတိန်, ဂရိတ်ဗြိတိန်, အမျိုးသား, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, အင်္ဂလိပ်, အင်္ဂလန်, စကော့တလန်, စကော့တလန်, ဝလေ, ဝေလနယ်, Irish သို့မဟုတ်ပါဝင်သည်၎င်းတို့၏အမည်များကိုအတွက်မပါဝင်နိုင်ပါတယ် အိုင်ယာလန်။ သို့သော်အတိုကောက် "ဗြိတိန်" သို့မဟုတ် "GB ကို" ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းအီးယူမှလင့်များပြသလျှင်ကော်ပိုရိတ်နာမ၌ 'ဥရောပ' 'သာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအသုံးပြုသောနှင့်နိုင်ပါတယ်။ '' အင်တာနေရှင်နယ် '' ကိုလည်းခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်, နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၎င်း၏အမည်ကို၌ဤစကားလုံးသုံးစွဲဖို့ရေခြားမြေခြားကုန်သွယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ခွင့်ပြုရှယ်ယာရှင်များအများဆုံးအရေအတွက်ကငါးဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများနှစ်ဦးစလုံးခွင့်ပြုနှင့်လည်းပူးတွဲခွင့်ပြု ရှယ်ယာ.
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာတစ်ဦးအတွင်းရေးမှူးမဖွစျနိုငျသောကွောငျ့တစ်ဦးကကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး, ဒါအားလုံးကော်ပိုရေးရှင်းကအနည်းဆုံးနှစ်ခုအရာရှိများရှိရမည်, လိုအပ်ပါသည်။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော် GBP0ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းပေးဆောင်နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ကြေးပေါင် 900 အကြောင်းကိုသာမန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ခု designated အရာရှိများတစ်ဦးအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးကိုဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းကခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်း၏အချို့သောကဏ္ဍများများအတွက်ထိုက်စဉ်းစားနေကြသည်ဆိုသောကြောင့်, သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ပိုရေးရှင်းကော်ပိုရိတ်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်အကောင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file များနှင့်စာရင်းစစ်၏အမှု၌နှစ်စဉ်အခွန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်.3ရက်သတ္တပတ်ယူတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးစီးအချိန်လျှောက်ထားမှတ်ပုံတင်ပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ်နာမတျော၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ်မူတည်အဖြစ် စာရွက်စာတမ်းများ.
အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်, ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သည့်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်, ဗြိတိန်၌ကျင်းပမည့်လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကော်ပိုရေးရှင်း name ကိုမှတ်ပုံတင်: ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား။